हेलिकाेप्टर बिग्रिँदा ओलीमा देखिएकाे त्यो आत्मबल - ब्लग - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
दीपक खरेल कार्तिक १३
हेलिकाेप्टर नउडेपछि फर्किंदै गरेका प्रधानमन्त्री अाेली
सबै तस्वीर: दीपक खरेल
एक जना अधिकारी नजिक गएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाए– यहाँबाट करिब डेढ किलोमिटर उकालो–ओरालो गरेपछि हेलिकोप्टर आउने ठाउँमा पुगिन्छ। सूचना दिने अधिकारी त्रसित मुद्रामा थिए। तर ओली उत्साही देखिए र, श्रीमती राधिकातर्फ संकेत गर्दै भने– म त पहाडमा हिँडेको मान्छे, बरु उनलाई गाह्रो होला।
केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। २५ असोज २०७२ मा सपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका उनको पहिलो निर्णय देशलाई तुइन मुक्त बनाउने थियो।
प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उनले गरेको यो पहिलो निर्णय थियो।
त्यही बेला ललितपुर र मकवानपुरका दुई गाबिस गिम्दी र मन्थली जोड्ने बागमती नदीमाथिको सोभाने बेसीमा झोलुंगे पुलको निर्माण सकियो। प्रधानमन्त्री बनेको करिब दुई महिनापछि पूरा भएको सो झोलुङ्गे पुल ओलीका लागि आफ्नो अभियान कार्यान्वयनको सन्देश दिने एउटा मौका थियो।
तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले आफू स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहँदा सोभानेबेसी झोलुंगे पुलको ‘अपडेट’ राखेका रहेछन्। उनकै सल्लाहमा मन्त्रिपरिषद्ले तुईन मुक्त नेपालको घोषणा गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिमण्डलले गरेको पहिलो निर्णयको कार्यान्वयन आभास दिन तामझामका साथ खोला किनारको खुला चौरमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रमका मुख्य अतिथि थिए, प्रधानमन्त्री ओली।
निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो श्रीमती राधिका शाक्यसहित उनी नेपाली सेनाको ९ एन राज कलसाइन भएको सुपरपुमा हेलिकप्टर चढेर गिम्दी आइपुगे।
ललितपुरको गिम्दी र मकवानपुरको मन्थली जोड्ने सोभानेबेसी झोलुंगे पुल उद्घाटनका लागि पर्दा उघारेर ताम्रपत्र देखाउनु पर्ने थियो। त्यो पुलको मुखैमा राखिएको थियो। जुन हेलिकोप्टर अवतरण गरेको ठाउँभन्दा केही पर थियो। बाटाे उकालाे र अाेरालाे थियाे।
तर गिम्दी पुगे पनि प्रधानमन्त्री ओली प्रत्यक्ष गएर पुलमा राखिएको ताम्रपत्रको पर्दा हटाउन गएनन्। ओली तल ओर्लन सकेपनि माथि उक्लिन स्वास्थ्यले नदिने भन्दै तत्कालीन संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास सहायक मन्त्री बिराजबहादुर बिस्टले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम कुँदिएको ताम्रपत्रको पर्दा हटाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले करिब ४० मिनेट भाषण गरे। ललितपुर र मकवानपुरबाट गएका स्थानीय र सरकारी अधिकारीले भरिभराउ मैदानमा ओलीले भनेका थिए ‘केही बोले भोली पत्रपत्रिकाले हावादारी कुरा गर्याे भन्छन् तर भनेको कुरा पूरा हुन्छ।’
कार्यक्रम सकियो। फर्किने तयारी सुरु भयो। ओली सबैलाई बिदाईको हात हल्लाउँदै सेनाको सुपरपुमा हेलिकोप्टरमा चढे। तर १० मिनेटसम्म प्रयास गर्दा समेत हेलिकोप्टर उड्न सकेन।
प्रधानमन्त्रीको टोली हेलिकोप्टरबाट तल ओर्लियो।
सेनाको टोलीले हेलिकोप्टरको खराबी जाँच्न थाले। ओलीलाई स्थानीयको आँगनमा कुर्सीमा बसाइयो। उनी त्यहीँ बसेर गफिन थाले। करिब आधा घण्टापछि सेनाको टोली आएर हेलिकोप्टर तयार भएको सूचना दियो। प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक बिदाईको हात हल्लाउँदै हेलिकोप्टर चढे। यसपटक पनि हेलिकोप्टर उडेन। सेनाले धेरै प्रयास गर्यो। सूपरपुमा उड्न सकेन।
तनाबमा सरकारी टाेली
फेरि ओर्लिए ओली। अब उपस्थित सरकारी अधिकारी, सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधि तनाबमा परे। प्रधानमन्त्रीलाई काठमाडौं फर्काउन स्थलमार्गबाट सम्भव थिएन। उनी चढेको हेलिकोप्टर उड्ने अवस्था रहेन। तत्कालै अर्को हेलिकोप्टर मगाउन पनि ठूला ठूला पहाड भएको सो क्षेत्रमा हेलिप्याड थिएन।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि स्थानीयकै आँगनमा पुर्याइयाे। ललितपुरबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनवानपुर लैजाने र त्यहाँबाट अर्को हेलिकोप्टर मगाएर फर्काउने उपाय केहीले सुझाए। यो व्यवहारिक उपाय पनि थियो। तर यसका लागि करिब डेढ किलोमिटर ओरालो र थोरै उकालो हिँड्नु पर्ने हुन्थ्यो।
बिरामी अवस्थाका प्रधानमन्त्रीलाई यो उकाली–ओरालीबारे कसरी जानकारी दिने? उनले के भन्लान्? अनि उनको स्वास्थ्य तलमाथि भइ पो हाल्ने हो कि? सबैलाई फसाद पर्यो।
एक जना अधिकारी नजिक गए। प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए, ‘यहाँबाट करिब डेढ किलोमिटर उकालो–ओरालो गरेपछि हेलिकोप्टर आउने ठाउँमा पुगिन्छ।’
सूचना दिने अधिकारी त्रसित मुद्रामा थिए। तर ओली उत्साही देखिए।
‘म त पहाडमा हिँडेको मान्छे, बरु उनलाई गाह्रो होला’, श्रीमती राधिकातर्फ संकेत गर्दै उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रहरीका डिएसपी सन्तोष तामाङ र सेनाको टोलीले सहारा दिएर हिँडाउन थाल्यो। राधिकालाई डिएसपी सुदिप राज पाठकले सहारा दिए।
ओली बेलाबेला केही जिज्ञासा राख्थे, रोकिन्थे अनि फेरि हिँड्थे। डेढ किलोमिटरको यात्रा पार गर्न करिब एक घण्टा लाग्यो। यस क्रममा बाटोमा भेटिएका स्थानीय युवाले प्रधानमन्त्रीसँग सेल्फी खिचाए। थकित भए पनि उनी फोटो खिच्ने बेला अनुहारमा गजबको चमक ल्याउँथे।
त्यतिबेला लाग्थ्यो मानौं उनलाई केही भएकै छैन। क्लिक पार्नुअघि उनी मुसुक्क हाँस्थे। यसो गर्दै उनको टोली मकवानपुर पुग्यो। त्यहाँ बस्ने कुनै ठाउँ थिएन। खोला किनारको चिसो ढुंगामा टुसुक्क शरीर बिसाए। उनीसँगै रहेका सहायक मन्त्री बिष्ट सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उभिए।
‘तिमीलाई भोक लाग्यो होला झोलामा बिस्कुट छ खाऊ,’ प्रधानमन्त्रीले स्नेहपूर्वक श्रीमती राधिकालाई सम्झाए।
‘म त ठिक छु बरु हजुर खानुहोस,’ राधिकाले भनिन्। ओलीले पनि खान मानेनन्। यतिबेला सेनाको टोली खोला किनारमा हेलिप्याड बनाइरहेको थियो।
बिरामी अवस्थाका ओली चिसो ढुंगामा बसेका थिए। बेला–बेला उनको अनुहारमा शरीरको सकस देखिन्थ्यो। फेरि उनी मुस्कुराउँथे। यो बीचमा उनको गाह्रो, छटपटी प्रस्ट अनुभूत गर्न सकिन्थ्यो। तर यी सब उतार चढावबीच उनको आत्मबल सधैँ उच्च रहिरह्यो। सायद त्यो नै उनको आफ्नो स्वास्थ्यसँग लड्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार थियो।
केही छिनमै सेनाको एनए ०५७ कलसाइनको एमआई १६ हेलिकप्टर खोला किनारको हेलिप्याडमा अवतरण गर्यो। उनी मुस्काए।
‘अब भने पक्का उडिन्छ’, उनले सधैँजस्तै ठट्टा शैलीमा हात हल्लाएर विदा लिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत छन्। उनको अति सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको छ। अस्पतालले मंगलबार बिहानको नियमति बुलेटिन सार्वजनिक गर्नुअघि नै ओलीले खाजा खाएको र आफ्नो दाह्री पनि काटेको खबर बाहिरियो। ओलीका यी बिहानी गतिविधीले उनको स्वास्थ्य सुधारउन्मुख रहेको संकेत गर्छ।
चिकित्सक टोली उनको शरीरमा बढेको चिनीको मात्रा र नियमित फ्लुको संक्रमण पूर्ण निदान नभएसम्म उनी अस्पतालकै सघन कक्षमा बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनामा छ। तर छटपटे र उच्च मनोबलका ओलीलाई अस्पतालको बन्द कक्षमा राखिरहन कति सहज छ?
चिकित्सकहरूसँग शुक्रबारसम्म आफुलाई ‘सिंहदरबार पठाउनु पर्छ’ भनेर उनले फेरि पनि आत्मबल कसेका छन्।
प्रकाशित १३ कार्तिक २०७५, मंगलबार | 2018-10-30 15:18:50